Rasmi: Garoomada Marti Galin Doona Finalka Koobabka Champions League Iyo Europe League Xilli Ciyaareedka Dambe Oo La Shaaciyay – Kooxda.com
Home 2017 September Champions League, Europa League, Spain, Wararka Maanta Rasmi: Garoomada Marti Galin Doona Finalka Koobabka Champions League Iyo Europe League Xilli Ciyaareedka Dambe Oo La Shaaciyay
Rasmi: Garoomada Marti Galin Doona Finalka Koobabka Champions League Iyo Europe League Xilli Ciyaareedka Dambe Oo La Shaaciyay
September 20, 2017 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Kadib markii maalmo kadib taageerayaasha loo furay Alabaabadiisa garoonka kooxda Atletico Madrid ee Estadio Wanda Metropolitano ayaa la filayaa in uu marti galiyo finalka Champions leageu xilli ciyaareedka 2018/19.
Sida laga soo xigtay Radio MARCA Gudida xiriirka kubada cagta yurub ee UEFA ayaa maanta ku kulmay caasimada dalka Switzerland ee Nyon halkaas oo loogu codeeyay in garoonka Estadio Wanda Metropolitano lagu qabto finalka Champions league xilli ciyaareedka dambe.
Sidoo kale garoonka Vodafone Arena ee kooxda Besiktas ayaa lagu qaban doonaa finalka Europa League ee iska xilli ciyaareedka dambe kadib markii uu garoonkaas ku fashilmay tartanka loogu jiray finalka champions league.
Kooxda.com ayaa xusay in kooxda Atletico Madrid ay garoonkeeda cusub furtay sabtidii iyada oo kula ciyaartay kooxda Malaga kadib markii loo dhamaystiray wax walba.
Atletico Madrid ayaa fursad u haysata ku guulaysiga champions league maadama garoonkeeda lagu qabanayo taas oo ka caawin karta in ay ugu dambayn gacanta ku dhigto koobkan.
Filed in: Champions League, Europa League, Spain, Wararka Maanta